एनएमबि बैंकद्वारा सेती नदी जलविद्युत आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन « Khabarhub
एनएमबि बैंकद्वारा सेती नदी जलविद्युत आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन
काठमाडौँ– एनएमबि बैंक लिमिटेडले २५ मेघावाटको सेती नदी जलविद्युत आयोजनाको मुख्य लगानीकर्ता भई वित्तीय व्यवस्थापन गरेको छ । गण्डकी प्रदेशको कास्की जिल्लामा रहेको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा निर्माण भइरहेको जलविद्युत परियोजना भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडद्वारा निर्माण गर्दैछ ।
यस परियोजनामा एनएमबि बैंक लि. अगुवा बैंक रहेको छ भने सह-वित्तीयकरणमा सहभागी अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्मचारी सञ्चय कोष र कृषि विकास बैंक लिमिटेड रहेका छन् ।
२५ मेघावाट क्षमता भएको सेती नदी जलविद्युत आयोजनाको कूल लागत रु ५ अर्ब रहेको छ । जसमध्ये बैकहरुको लगानी कूल रु. ३.५० अर्बको हुनेछ । यो आयोजनासमेत एनएमबि बैंक लि.ले कूल ४३ वटा जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानी गरिसकेको छ ।
प्रकाशित मिति : ३० आश्विन २०७७, शुक्रबार ११ : ३९ बजे